आकर्षक सिभीले अष्ट्रेलियामा दिलाउछ रोजगारी,लेख्ने कसरी ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ कार्तिक २०७५, आईतवार ०७:११ |
मेलबर्न । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रुपमा अष्ट्रेलियामा तपाईले पाक्षिक रुपमा ४० घण्टा काम गर्न पाउनुहुन्छ । तर अष्ट्रेलियामा बढ्दो विदेशी विद्यार्थीहरुको आकर्षण र संख्याका कारण रोजगारीका क्षेत्रमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि रोजगारीमा आवेदन दिदा आफ्नो सिभी वा रिज्युम बुझाउनुपर्छ । राम्रो र पूर्ण सिभी वा रिज्युमले मात्र तपाईले रोजगारी पाउने बढी सम्भावना रहन्छ ।
सिभी वा रिज्युममा के के उल्लेख गर्ने ?
राम्रो र पूर्ण सिभी वा रिज्युम हुन त्यसमा तपाईकाबारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी शिलशिलावद्द रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ । सामान्यतय सिभी वा रिज्युम लेख्दा तपाईको उमेर,विवाहित÷अविवाहित,तपाईका बालबच्चाहरुको यकिन संख्याको साथमा तपाईले मान्ने धर्म समेत खुलाए अझ राम्रो मानिन्छ । तर तपाईमा कुनै अपाङ्गता छ भने,त्यसबारेमा सिभीमा खुलाइरहन पर्दैन । किनभने अष्ट्रेलियन कानूनले कसैलाई अपाङ्गता भएकै कारण रोजगारी वा कुनै पनि अवसरबाट बञ्चित गराउन वा भेदभाव गर्न पूर्ण निषेध छ ।
अष्ट्रेलियाको कुनै कुनै क्षेत्रमा लिंकडएलएनलाई अझै पनि मानव संसाधनकोलागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । त्यसैले लिंकडएलएनमा खाता खोलेर आफ्नो सिभी वा विवरण अपडेट बनाइराख्नु राम्रो हुन्छ । एकपटक खाता खोलेपछि पटक पटक काम वा पदकालागि नयाँ खाता खोलिरहने झण्झट गर्नुपर्दैन ।
कभर लेटर अवश्य लेख्नुहोस्
हुन त तपाईले निवेदन दिन लागेको काम,क्षेत्र र पद अनुसार कभर लेटर आवश्यक भए नभएको पहिले नै खुलाइसकिएको हुन्छ । कुनै कुनै कम्पनी वा पदमा अनलाइनबाट फाराम भर्नुपरे पनि कभर लेटर आवश्यक नहुन सक्छ । तर जहाँ कभर लेटर आवश्यक हुन्छ,त्यसमा भने केही कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ । मूलतः कभर लेटर लेख्दा यी तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ :
१. प्रत्येक पद वा आवेदनकालागि छुट्टै र नयाँ कभर लेटर लेख्नुपर्छ ।
२ कभर लेटर विशुद्ध निजात्मक (तपाईसँग मात्र सम्बन्धित) हुनुपर्छ तर विश्वसनीय हुन आवश्यक छ ।
३. अनावश्यक गहन वा गाह्रो भाषा र शब्दको साटो सरल भाषा र शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ ।
राम्रो र पूर्ण सिभी वा रिज्युम लेख्दा बिर्सनै नहुने कुराहरु :
१ सत्य कुरा मात्र उल्लेख गर्नुहोस्
२ राम्रोसँग प्रुफ रिड अर्थात शुद्धशुद्धी गर्नुहोस् अथवा अरु कसैलाई गराउनुहोस् ।
३ भाषा सरल र छरितो प्रयोग गर्नुहोस्
४ बढीमा दुई पृष्ठमा अटाउनुहोस् ।
Previousफेरि सर्यो नेकपा सचिवालय वैठक
Nextपप स्टार जस्टिन बिबरले गरे विवाह
अष्ट्रेलियामा पाँच नेपाली चढेको गाडी दुर्घटनाग्रस्त : एकको मृत्यु, चार घाइते
१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:११
१९ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०१:४०